अष्ट्रेलियाको लागि अन्र्तराष्ट्रिय परामर्शदाता चितवनमा!! – Saurahaonline.com
अष्ट्रेलियाको लागि अन्र्तराष्ट्रिय परामर्शदाता चितवनमा!!
चितवन, असोज ११ । वैदेशिक शिक्षालाई केन्द्रित गरेर चितवनमा निशुल्क सेमिनार तथा एजुकेशन फेयर हुने भएको छ ।
नारायणगढको एजुकेशन प्लानेटले अन्र्तराष्ट्रिय परामर्शदाताबाट परामर्श दिन कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । वैदेशिक शिक्षाको लागि अष्ट्रेलिया विद्यार्थीको रोजाई बनेपछि त्यसको वारेमा विस्तृत जानकारी समेत दिईने एजुकेशन प्लानेटले जनाएको छ ।
आज पत्रकार सम्मेलन गरी एजुकेशन प्लानेटले सो वारे जानकारी गराएको हो । असोज १५ गते भरतपुर गार्डेन रिसोर्टमा हुने सेमिनारमा अन्र्तराष्ट्रिय परामर्शदाता सजीत लाल्वानीले विद्यार्थीलाई परामर्श दिनेछन । अष्ट्रेलियाका १० बटा शैक्षिक संस्थाका क्षेत्रिय प्रतिनिधि समेत आउने एजुकेशन प्लानेटका संचालक एवं कार्यक्रम संयोजक देवराज कंडेलले जानकारी दिनुभयो ।
युवा अवस्थामा समयको महत्व र अष्ट्रेलियाको अध्ययनको अन्योलता निकारण गर्न चितवनमै फरक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कंडेलले बताउनुभयो । नेपाल र भारतका प्रतिनिधि आउने बताईएको छ । बैदेशिक शिक्षाको विषयमा परामर्श दिउपनि बैदेशिक पलायन रोक्न पनि कार्यक्रम केन्द्रित रहेको एजुकेशन प्लानेटले जनाएको छ ।